ရယ်စရာကာတွန်း & တိရိစ္ဆာန် Pop-Up Push Bubble Fidget ကစားစရာ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ | WoopShop®
ရယ်စရာကာတွန်း & တိရိစ္ဆာန် Pop-Up Push Bubble Fidget ကစားစရာ
$12.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $18.99
အရောင် လိမ္မော်ရောင် Octagon အစိမ်းရောင် Octagon လိမ္မော်ရောင်ပန်းပွင့် အစိမ်းရောင်ပန်းပွင့် Yelolow ပန်း ခရမ်းရောင်ပန်း အစိမ်းရောင်နှလုံး လိမ္မော်ရောင်နှလုံး Yelolow နှလုံး ခရမ်းရောင်နှလုံးသား လိမ္မော်ရောင်ပတ်ပတ်လည် အစိမ်းရောင် Round Yelolow က Round Yelolow Octagon ခရမ်းရောင် Octagon လိမ္မော်ရောင်ရင်ပြင် အစိမ်းရောင်ရင်ပြင် Yelolow ရင်ပြင်မှာ ခရမ်းရောင်ရင်ပြင် Yelolow စတား ခရမ်းရောင်စတား လိမ္မော်ရောင်စတား အစိမ်းရောင်စတား Yelolow ကြံ့ခိုင်ရေး ခရမ်းရောင်ကြံ့ လိမ္မော်သီးကြံ့ စိမ်းလန်းသောကြံ့ Yelolow မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း ခရမ်းရောင်မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း အစိမ်းရောင်မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း ပန်းရောင် Mermaid ရောင်စုံလှည့်လည် နာနတ်သီး မြင်းစိမ်း ရောင်စုံနှလုံး ရောင်စုံရင်ပြင် ရောင်စုံ Octagon ပန်းရောင်ဝေလငါး အပြာရောင်ဝေလငါး အဝါရောင်ရေဘဝဲ ရေဘဝဲနီ ခရမ်းရောင် ပန်းရောင်လိပ်ပြာ ပန်းနုရောင် Yelolow မြင်း ခရမ်းရောင်လိပ်ပြာ အစိမ်းရောင်လိပ်ပြာ Yelolow လိပ်ပြာ ရောင်စုံ Seashell အဝါရောင် Mickey ရောင်စုံဒိုင်နိုဆော ရောင်စုံကြံ့ ရောင်စုံဖား ရောင်စုံဇီးကွက် အပြာရောင်ဇီးကွက် ရောင်စုံဝေလငါး ပန်းရောင်လင်းပိုင် အပြာရောင်လင်းပိုင် အပြာရောင်မစ်ကီ ပန်းရောင်လေး အစိမ်းရောင်ဖား အပြာရောင်ကိတ်မုန့် ပန်းရောင်ကိတ်မုန့် ရောင်စုံဂဏန်း နှင်းဆီပန်းရောင်ကိတ်မုန့် ရောင်စုံမုန်လာဥ ဂဏန်း ရောင်စုံကျောက်ပုစွန် မုန်လာဥနီ Muticolor တိုက်လေယာဉ် ရောင်စုံတိုက်လေယာဉ် ခရမ်းရောင်နေကြာ အဝါရောင်နေကြာ အနီရောင်စတော်ဘယ်ရီ သက်တံစတော်ဘယ်ရီ ရောင်စုံ Mickey ရောင်စုံရေဘဝဲ ရောင်စုံတိမ် ရောင်စုံလိပ်ပြာ ဒီနောဆီးယား အပြာရောင်လေး ခရမ်းရောင် Seashell ရောင်စုံ Apple အစိမ်းရောင် Seashell အပြာရောင် Seashell ခရမ်းရောင် Mickey ပန်းရောင် Seashell ပန်းရောင်ဇီးကွက် 1 pce ကျပန်း Round အဝါရောင်ဇီးကွက် 1 pce ကျပန်းရင်ပြင် 1 pce ကျပန်း Octagon အနီရောင်ပန်းသီး 1 pce ကျပန်းနှလုံး Muticolor ဒိုင်နိုဆော အစိမ်းရောင်ဖား သက်တံကြောင် ကွောငျ သက်တံ Cactus သက်တံပစ္စတို
လိမ္မော်ရောင် Octagon အစိမ်းရောင် Octagon လိမ္မော်ရောင်ပန်းပွင့် အစိမ်းရောင်ပန်းပွင့် Yelolow ပန်း ခရမ်းရောင်ပန်း အစိမ်းရောင်နှလုံး လိမ္မော်ရောင်နှလုံး Yelolow နှလုံး ခရမ်းရောင်နှလုံးသား လိမ္မော်ရောင်ပတ်ပတ်လည် အစိမ်းရောင် Round Yelolow က Round Yelolow Octagon ခရမ်းရောင် Octagon လိမ္မော်ရောင်ရင်ပြင် အစိမ်းရောင်ရင်ပြင် Yelolow ရင်ပြင်မှာ ခရမ်းရောင်ရင်ပြင် Yelolow စတား ခရမ်းရောင်စတား လိမ္မော်ရောင်စတား အစိမ်းရောင်စတား Yelolow ကြံ့ခိုင်ရေး ခရမ်းရောင်ကြံ့ လိမ္မော်သီးကြံ့ စိမ်းလန်းသောကြံ့ Yelolow မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း ခရမ်းရောင်မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း အစိမ်းရောင်မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း ပန်းရောင် Mermaid ရောင်စုံလှည့်လည် နာနတ်သီး မြင်းစိမ်း ရောင်စုံနှလုံး ရောင်စုံရင်ပြင် ရောင်စုံ Octagon ပန်းရောင်ဝေလငါး အပြာရောင်ဝေလငါး အဝါရောင်ရေဘဝဲ ရေဘဝဲနီ ခရမ်းရောင် ပန်းရောင်လိပ်ပြာ ပန်းနုရောင် Yelolow မြင်း ခရမ်းရောင်လိပ်ပြာ အစိမ်းရောင်လိပ်ပြာ Yelolow လိပ်ပြာ ရောင်စုံ Seashell အဝါရောင် Mickey ရောင်စုံဒိုင်နိုဆော ရောင်စုံကြံ့ ရောင်စုံဖား ရောင်စုံဇီးကွက် အပြာရောင်ဇီးကွက် ရောင်စုံဝေလငါး ပန်းရောင်လင်းပိုင် အပြာရောင်လင်းပိုင် အပြာရောင်မစ်ကီ ပန်းရောင်လေး အစိမ်းရောင်ဖား အပြာရောင်ကိတ်မုန့် ပန်းရောင်ကိတ်မုန့် ရောင်စုံဂဏန်း နှင်းဆီပန်းရောင်ကိတ်မုန့် ရောင်စုံမုန်လာဥ ဂဏန်း ရောင်စုံကျောက်ပုစွန် မုန်လာဥနီ Muticolor တိုက်လေယာဉ် ရောင်စုံတိုက်လေယာဉ် ခရမ်းရောင်နေကြာ အဝါရောင်နေကြာ အနီရောင်စတော်ဘယ်ရီ သက်တံစတော်ဘယ်ရီ ရောင်စုံ Mickey ရောင်စုံရေဘဝဲ ရောင်စုံတိမ် ရောင်စုံလိပ်ပြာ ဒီနောဆီးယား အပြာရောင်လေး ခရမ်းရောင် Seashell ရောင်စုံ Apple အစိမ်းရောင် Seashell အပြာရောင် Seashell ခရမ်းရောင် Mickey ပန်းရောင် Seashell ပန်းရောင်ဇီးကွက် 1 pce ကျပန်း Round အဝါရောင်ဇီးကွက် 1 pce ကျပန်းရင်ပြင် 1 pce ကျပန်း Octagon အနီရောင်ပန်းသီး 1 pce ကျပန်းနှလုံး Muticolor ဒိုင်နိုဆော အစိမ်းရောင်ဖား သက်တံကြောင် ကွောငျ သက်တံ Cactus သက်တံပစ္စတို
ရယ်စရာကာတွန်း & တိရိစ္ဆာန် Pop-Up Push Bubble Fidget Toy - Orange Octagon backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ထောက်ခံချက်အသက် - ၆-၁၂ + y
လက်မှတ်: ဥရောပအသိအမှတ်ပြု (CE)
အဓိကအကြောင်းအရာ - သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ အားကစား
ဒီလှပတဲ့ကစားစရာကို Silicone နဲ့လုပ်ထားတာပါ။ ပြီးတော့ထိတွေ့ရတာပျော့ပါတယ်။
အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - စိတ်ဖိစီးမှုဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ဖြေလျှော့ကစားခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချသည့်ကစားစရာများ၊ Autism အထူးကစားစရာများ
အရမ်းအေးတယ်! သိပ်သည်း, perfectlyုံကလစ်နှိပ်ပါ။ ပေးပို့မြန်သည် ကျနော်တို့အကြီးအကျယ်ပျော်ရွှင်ကြသည်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ muitooo ကြိုက်တယ်
အရမ်းအေးတယ်! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! အားလုံးပုံထဲမှာရှိသကဲ့သို့အားလုံးစူပါဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပင်းတစ်ခုစီတွင်ဖား၏ပုံကိုပုံတူပွားထားသည်။